Hasselbaink Oo Magacaabay LABADA Ciyaartoy Oo Haddii Chelsea - Axadle | Wararka Africa
Jimmy Floyd Hasselbaink ayaa usoo jeediyey Chelsea inay bishan January lasoo saxeexdaan laba ciyaartoy oo uu rumaysan inay u sahli doonaan inay horyaalka Premier League ku garaacdo Liverpool iyo Man City isla xili-ciyaareedkanba.
Blues ayaa hadda ku jirta kaalinta shanaad ee miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League, waxaanay saddex dhibcood ka dambeysaa Leicester Ctiy oo hoggaanka haysa, iyadoo afar guulood kasoo heshay siddeeddii ciyaarood ee ay dheeshay.
Kooxda tababare Frank Lampard oo xili ciyaareedkii hore ku dhamaysatay kaalinta shanaad ayaa waxay rajo ka qabtaa inay sare u socon doonto oo ay koobka ku dagaallami doonto, maadaama ay suuqa galeen oo ay lasoo saxeexdeen ciyaartooyo ay lacag badan kasoo bixiyeen sida Timo Werner, Hakim Ziyech iyo Ben Chilwell oo lagu sii daray Thiago Silva oo ay bilaash kula soo saxeexdeen.
Jimmy Floyd Hasselbaink ayaa rumaysan in saxeexyadani ay Chelsea u dhoweeyeen inay ku tartanto horyaalka balse ay haddana ka dhiman yihiin laba saxeex oo kale oo haddii ay Stamford Bridge yimaaddaan ay horyaalkana isla xili ciyaareedkan ba ku guuleysan doonaan.
Difaaca kooxda Leicester City ee Caglar Soyuncu oo u dhashay waddanka Turkey iyo Milan Skriniar oo ka tirsan Inter Milan laakiin aan inta badan ciyaarin ayuu Hasselbaink u sheegay Blues inay lasoo saxeexdaan, si ay horyaalka ugu guuleystaan, waxaanu yidhi: “Dad badan ayaa ka hadlaya Kalidou Koulibaly laakiin isagu waa 29 jir, aadna qaali ayuu u noqon karaa. Anigu waxa aan dhab ahaantii jeclaan lahaa difaaca Leicester ee Caglar Soyuncu oo ay ila tahay inuu aad ugu fiicnaan lahaa Chelse.a”
Hasselbaink oo afka hore ee weerarka uga ciyaari jiray Chelsea, isla markaana u saftay 177 kulan una dhaliyey 87 gool, waxa uu intaa ku daray: “Waxa aan jeclaan lahaa ciyaartoy kale oo dhexda ah oo hal-abuure ah. Waan jecelahay Mason Mount laakiin qof kale oo isaga ka garab ciyaara ayaa loo baahan yahay. Havertz ayaa halkaa jooga oo waan ogahay balse wax loo baahan yahay caafimaad iyo tartan tayo leh in halkaa laga sameeyo.
“Ilama aha in Chelsea ay ka fog tahay (hanasahda horyaalka.”
Chelsea ayaa Sabtida safar ku tegaysa St James’ Park oo ay isku haleeli doonaan Newcastle United.